साल्ट ट्रेडिङ र खाद्यले सुरु गरे बजेटले घोषणा गरेको छुट कार्यान्वयन, के–केमा कति पाइन्छ छुट ? « Bizkhabar Online
साल्ट ट्रेडिङ र खाद्यले सुरु गरे बजेटले घोषणा गरेको छुट कार्यान्वयन, के–केमा कति पाइन्छ छुट ?
4 June, 2021 9:27 am
काठमाडौं । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र खाद्य तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेको छुट कार्यान्वयन सुरु गरेका छन् । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को बजेट वक्तव्य मार्फत यी दुई कम्पनीबाट उपभोक्तले खरिद गर्ने खाद्य सामग्रीमा निषेधाज्ञा अवधिभर २० प्रतिशत छुट गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङबाट विक्री हुने चामल, पिठो, दाल, नुन, खानेतेल, चिनी तथा खाना पकाउने ग्याँसको विक्री मूल्यमा २० प्रतिशत छुट दिने उल्लेख गरिएको थियो ।